I Akadia, atao ihany koa hoe Akadia Vaovao dia tany any Amerika Avaratra tsy manana sisintany mazava. Ara-kolontsaina sy ara-tantara ny akadia.
Any amin'ny mpanjanatany eoropeanina nipetraka tany Akadia (taloha) noforonina tamin'ny 1604 ny Akadianina ankehitriny. Zanatany frantsay i Akadia tamin'ny 1604 hatramin'ny 1713, teo amin'io daty io ny Akadia no lasa zanatany Anglisy. Noroahana daholo ny Akadianina tamin'ny Grand Dérangement tamin'ny 1755 hatramin'ny 1763, nampanjavona any Akadia taloha io epizôda io.
3.1 Zanatany frantsay
4 Fitiavan-tanindrazana Akadianina
4.1 Evan'ny Akadia
6 Fitiavan-tanindrazana akadianina
Faritany ngezabe i Akadia, ary tsy dia fantatra ny sisintaniny. Tsy misy lalàna mahalala i Akadia any Amerika. Kanefa, araka ny lazain'ny mpanoratra maro ohatran'i Léon Thériault, Michel Roy sy Adrien Bérubé, efa verin'ny Frantsay i Akadia taorian'ny taona 1763 ary efa nivovoina sy noroahana ny ankabiazan'ny Akadianina nijanona, noho izany, dia efa fifanoheram-piteny izany miresaka momba an'i Akadia anefa efa tsy misy Akadia izany intsony. Niova tamin'ny fandrosoan'ny tantara ny hevitry ny teny hoe Akadia ary mbola misy adihevitra ankehitriny momba ny dikan'io teny io. Misy olona mihevitra hoe tsy manana sisintany i Akadia
Ny saritanin'i Akadia ara-tantara (miloko mavo)
Tamin'ny 1979, namolavola ny dika efatry ny teny hoe Acadia nekena i Adrien Bérubé. Ny dika voalohany dia i Akadia ara-tantara. Tafiditra ao amin'io faritany io ny Helodrano Fundy na, raha velarina kokoa ny dikany, ny morontsiraka misy anelan'ny renirano Sainte-Croix any andrefana sy ny Baie des Chaleurs any avaratra, Ao ny nosy atsimon'ny Golfe du Saint-Laurent (jereo ny saritany).
Ny dika faharoa dia i Akadia jenealôjika, na Akadian'ny diaspora. Amin'izany Akadia izany no misy ny fianakaviana akadianina noroahina tamin'ny Grand Dérangement: ny Faritanin'ny Ranomasimbe Atlantika, i Quebec, i Saint-Pierre-et-Miquelon, i Nouvelle-Angleterre, i Louisianan bt Antila, i Guyane Frantsay, i Nosy Malouines ary i Frantsa. Ny fahatelo dia i Akadia ankehitriny, ao amin'ny Akadia ankehitriny no misy ny faritany an-dranomasin'i Kanada. Ny fahefatra dia i Akadia prôspektiva, ao amin'izany Akadia izany no misy ny kaontia miteny frantsay any Nouveau Brunswick.
Miankina amin'ny ranomasina ny vakokan'i Akadia. Eo akaiky na eo amoron-dranomasina ny ankabiazan'ny fikambanana. Manana endrika manokana ny faritra ipetrahan'ny Akadianina.
Miaina ao amin'ny faritany Kanadianina efatra ny Akadianina (Nouveau-Brunswick, Québec, Nouvelle-Ecosse, ary Nosin'i Prince-Edouard) sy faritany telo any Etazonia: Louisiana, Maina ary Massachusets.
Any amin'i Akadia avaratra, zo amoron'ny Baie des Chaleurs sy ny moron'ny Révière Restigouche ny loham-pirenen'i Akadia avararatra, any atsimon'ny faritan'i Quebec no misy izy ireo.
Efa voazahan'ny Viking tamin'ny taonjato faha folo ny faritanin'i Akadia. Tonga tany ny mpanjono lamôria tamin'ny taonjato faha telo ambin'ny folo. Ny Micmac, ny Malesita sy ny Passamaquoddy no tompon-tany teo tamin'izany. Nihaona tamin'ny Micmac i Jacques Cartier tamin'ny fizahana tamin'ny 1534. Nila niandry ny taona 1604 vao noforonin'i Pierre Dugua de Mons i Akadia.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Akadia&oldid=966649"
Dernière modification le 25 Febroary 2019, à 17:35
Voaova farany tamin'ny 25 Febroary 2019 amin'ny 17:35 ity pejy ity.